UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs | Linux မှ
UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs ၅
ယနေ့ငါတို့နှင့်အတူဆက်လက် နဝမ post နှင့်အပေါ် penultimate Window မန်နေဂျာများ (Windows Managers - WM, English)၊ အောက်ပါတို့ကိုသုံးသပ်ပါမည် 5ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကနေ 50 ယခင်ကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
“ အနာဂတ်မှာ GUI အပြည့်အစုံဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တဲ့ WM အသစ်တစ်ခု၊ ဒါကြောင့်လက်ရှိခေါ်ယူနေရတာ Unix Desktop ပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း (UDE)။ ဤစီမံကိန်းတွင် QT သို့မဟုတ် GTK + ကဲ့သို့သောအထူး GUI စာကြည့်တိုက်များမသုံးပါ။ ၎င်းသည် Xlibs စံကိုသာသုံးပြီး၎င်းကိုမြန်ဆန်စွာ၊ အလင်းရောင်နှင့်မှီခိုမှုများကိုရှောင်ရှားရန်သာအသုံးပြုသည်။ UltimateWM သို့မဟုတ် UDE တွင်လုံးဝမူရင်း Look'n'Feel ရှိသည်၊ ၎င်းသည်လူသိများသော "ဂန္" ၀ င်းဒိုးစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်၏အခြားကော်ပီတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။"။
မလှုပ်မရှားစီမံကိန်း။ လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့်ကနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းတွင် taskbar သို့မဟုတ် desktop panel သို့မဟုတ်အလားတူအရာမရှိပါ။ ထို့အပြင်ပြတင်းပေါက်များတွင် title bar မပါရှိခြင်းကြောင့် windows ၏အနားစွန်းတွင်ပိတ်ရန်၊ အရွယ်အစားပြောင်းရန်၊ iconize လုပ်ရန်၊ ထိုခလုတ်များကို hexagonal သို့မဟုတ် honeycomb menu ဟုခေါ်ပြီးအသုံးပြုသူသည်ပြတင်းပေါက်အနားစွန်းသို့နှိပ်သောအခါပေါ်လာသည်။
အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည် window border နှင့် desktop နောက်ခံရှိကွဲပြားခြားနားသော mouse ခလုတ်များကိုသုံးခြင်းဖြင့်လုံးဝအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် support တစ်ခုတည်းသာရှိသောကြောင့် UDE ကိုထိရောက်စွာသုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများအတွက်အလွန်အခြေခံကျသည်။
“ X ၀ င်းဒိုးစနစ်အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ Window Manager".
၎င်းတွင်ခေါင်းစဉ်ဘားများ၊ ပုံသဏ္windowsာန်ပြတင်းပေါက်များ၊ အိုင်ကွန်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံအမျိုးမျိုး၊ သုံးစွဲသူသတ်မှတ်ထားသော macro လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ခလုပ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ကီးဘုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သုံးစွဲသူသတ်မှတ်ထားသော key နှင့် pointer ခလုတ်များပါ ၀ င်သည်။
နောက်ဆုံး client ကို load လုပ်သောအခါ၎င်းကိုမကြာခဏကွပ်ကဲသည်၊ သို့ဖြင့်၎င်းသည်ထိုနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်သောအခါ၎င်းမှထွက်သောအခါအသုံးပြုသူ session ကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သူကအပေါ်ဆုံးမှာခေါင်းစဉ်ဘားနှင့်အတူနယ်စပ်နှင့်အတူဝိုင်းရံ application ကိုပြတင်းပေါက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Title Bar၊ ၀ င်းဒိုး၏အမည်၊ ၀ င်းဒိုးတွင်ကီးဘုတ်ထည့်သွင်းမှုကိုညွှန်ပြသည့်ထောင့်မှန်areaရိယာနှင့် `ခေါင်းစဉ်ဘားခလုတ်များ known ဟုခေါ်ဝေါ်သော function box သုံးခုပါဝင်သည်။
ခေါင်းစဉ်ဘားရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အပေါ်သို့မြှားပါသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ၀ င်းဒိုးတွင်အသုံးချနိုင်သည့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါသောမီနူးတစ်ခုကိုဆောင်ယူလာခဲ့သည်။
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ အထုပ် "vtwm"ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WM နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်သည် link ကို သို့မဟုတ်ဤအခြား link ကို.
Linux X Server အတွက်ခေတ်မီ။ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်းသောအစားထိုးမှုအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော Window Manager နှင့် Composer သည်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့် GNOME နှင့် KDE ကဲ့သို့သောအားကောင်းသည့် Desktop Environments သည်၎င်းကိုအပြည့်အဝနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆို၍ မကြာမီတွင်သီးသန့်အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ".
၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်အတွက်ရှုပ်ထွေးသောအချက်အလက်များစွာကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်ဂရပ်ဖစ် stack ရိုးရှင်းခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်သူသည်သူလည်းဖွဲ့စည်းမှုအလုပ်သူ့ကိုယ်သူစီမံခန့်ခွဲသည်။
တေးရေးဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်စကားပြောဆိုရန် protocol တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်း protocol ၏ C library ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ တေးရေးဆရာသည် Linux kernel နှင့် evdev input devices များ၊ X application တစ်ခုသို့မဟုတ် Wayland client တစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောသီးခြား display server တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည် Weston ရည်ညွှန်းမှုအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုတေးရေးဆရာအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Weston သည် X client တစ်ခုအနေဖြင့်သို့မဟုတ် Linux KMS အောက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Weston ၏တေးရေးဆရာသည်အနည်းဆုံးမြန်ဆန်သောတေးရေးဆရာဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းနှင့် embedded အသုံးပြုမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ "xwayland" အထုပ်ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WM နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်သည် link ကို.
"Go ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားနဲ့လုံးလုံးရေးထားတဲ့ Window Manager".
တက်ကြွသောစီမံကိန်းနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းတွင် X နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှသည် ၀ င်းဒိုးတွင်စာသားဆွဲခြင်းအထိ Go ၌ရေးထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အများအားဖြင့် ICCCM နှင့် EWMH နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုမန်နေဂျာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာနှစ်ခုရှိသည်။ ၄ င်းတို့သည် Tiling နှင့် Stacking type WMs နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ မော်နီတာတစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မော်နီတာတစ်ခုစီအားကိုယ်ပိုင်အလုပ်နေရာကိုပြသနိုင်ပြီးအခြားမော်နီတာများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
၎င်းသည်အလွန်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် command အမြောက်အများကို keystrokes သို့မဟုတ် mouse presses များ၊ ပြတင်းပေါက်အလှဆင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီခြင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမီးလျှံချိတ်များချိတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ configuration များအားလုံးကို INI type file format ကိုအသုံးပြုပြီးရိုးရိုး variable ကိုအစားထိုးခြင်းအတွက် support လုပ်တယ်။ XML ဖိုင်များကိုအသုံးမပြုပါ၊ ပြန်လည်စုစည်းရန်ဘာမှမရှိပါ၊ script များကိုလည်းအသုံးမပြုပါ။
၎င်းကိုကူးယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း (သို့) နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ link ကို.
“ X Window System အတွက်အနည်းဆုံး Window Manager ပါ".
မလှုပ်မရှားစီမံကိန်းဖြေ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်ကျော်ကနောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာစွမ်းရည်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ပြတင်းပေါက်များကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသို့ရွှေ့ပါ။ ပြတင်းပေါက်များကိုအလျားလိုက်ရောဒေါင်လိုက်ပြောင်းပါ။ ဝှက်ထားသည့်ဝင်းဒိုးများကိုပြန်ထားပါ။ ၀ င်းဒိုးများကိုဖျက်ပါ။
၎င်းသည်စီမံခန့်ခွဲထားသောဝင်းဒိုးတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ကြော့ရှင်းသောမူဘောင်တစ်ခုပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အခြားအရာများအကြားအိုင်ကွန်များ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ virtual desktop များ၊ extensible root menus များနှင့် toolbars များကိုမပေးနိုင်ခဲ့ပါ။
ဤမွမ်းမံထားသော WM ကိုများသောအားဖြင့်မတူညီသော repositories များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည် GNU / Linux Distros၏နာမအောက်မှာ အထုပ် "wm2"ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသော package manager၊ ဂရပ်ဖစ် (သို့) terminal ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤ WM နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတွင်တွေ့နိုင်သည် link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" နောက်လာမယ့် ၅ ခု «Gestores de Ventanas»မဆိုလွတ်လပ်သော «Entorno de Escritorio»ခေါ် UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs ၅
Gnome 3.38 ကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
Oracle က Java SE 15 ဖြန့်ချိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်